कालापानी र लिपुलेकबारे सरकारले निकालेको विज्ञप्ती अमान्य, भारतले बुझ्नेगरि अंग्रेजीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ : ई. कँडेल – newslinesnepal
कालापानी र लिपुलेकबारे सरकारले निकालेको विज्ञप्ती अमान्य, भारतले बुझ्नेगरि अंग्रेजीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ : ई. कँडेल
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १४:३८
कँडेलले भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको भन्दै उक्त कदम आफूलाई कुनैपनि हालतमा सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले भने,‘भारतको पछिल्लो कदमबारे म निकै दुःखी छु । लिपुलेक र कालापानीबारे सदियौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ भन्ने कुरा साँचो हो । तर, यो विवाद द्धिपक्षीय कुटनीतिक माध्यमबाट हल गरिनुपर्छ ।’ कँडेलले आफ्नो अभिव्यक्ति अंग्रेजीमा एक विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक गरेका हुन् । समचार तस्बिर रिपोर्टस क्लबबाट